ဤအရာသည်သင့်အားကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးစကားဝှက်မန်နေဂျာများဖြစ်သည် Gadget သတင်း
Ignatius ခန်းမ | | မိုဘိုင်း, ကွန်ပြူတာများ, Software များ
အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်မိုဘိုင်းပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသောသုံးစွဲသူအရေအတွက်သည်နောက်ဆုံးတွင်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများထက်ကျော်လွန်သွားသည်။ သုံးစွဲသူများ၏ရွေ့လျားမှုတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ အန္တရာယ်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေခြိမ်းခြောက်မှုများ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြိုက်ဆုံးအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြုံတွေ့နိုင်သည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း၊ အဓိကလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများကသူတို့ပြသသည့်စာရင်းပြုစုသည်၊ ဆယ်နှစ်ဆက်တိုက်အများဆုံးအသုံးပြုသောစကားဝှက်များသည်တူညီနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမနေရာများမှ ၁၂၄၃၅၆၇၈၉၀ စကားဝှက်၊ စကားဝှက်၊ ၁၁၁၁၁၁ နှင့်အလားတူသောနေရာများဖြစ်သည်။ စကားဝှက်တွေကိုမှတ်မိဖို့လွယ်ကူပေမဲ့၊ ဒီဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်။ ဤအရာကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သည်မှာ စကားဝှက်မန်နေဂျာ.
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသော ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက်တူညီသောစကားဝှက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်သော်လည်းသုံးစွဲသူများစွာပြုလုပ်သောအမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၀၀% အကာအကွယ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တယ် ဝဗ်ဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုစီအတွက်မတူညီသောသော့တစ်ခုဖန်တီးပါ နံပါတ်များ၊ အက္ခရာများ (စာလုံးကြီးအကြီးအသေးများနှင့်အခြားအထူးအက္ခရာများအပါအ ၀ င်) စာလုံး ၈ လုံးပါ ၀ င်ရမည့်စကားဝှက်ဖြစ်သည်။
ဤအရာအားလုံးသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအချိန်များစွာယူရုံတင်မကဘဲကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပင် ခွဲ၍ မရသောနီးပါးသောသော့များကိုမှတ်မိရန်မှတ်ဥာဏ်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့မှစကားဝှက်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသော application အချို့ရှိပါသည်။ အင်တာနက်မှတဆင့် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောစကားဝှက်များကိုဖြစ်စေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းကိရိယာများမှတစ်ဆင့်။
ငါစကားဝှက်မန်နေဂျာတွေအကြောင်းပြောနေတာ၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာငါတို့ရဲ့ဒေတာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့စကားဝှက်တွေထုတ်ပေးရုံတင်မကဘူး သူတို့ကသူတို့ကိုသိုလှောင်တာဝန်ခံဖြစ်ကြသည်ထို့ကြောင့်တစ်ချက်ကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲလိုသောနာမည်နှင့်စကားဝှက်တို့ကိုထည့်စရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူနိုင်ပြီးယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့မပျော်နိုင်သောအဆင်ပြေမှုကိုပေးသည်။
ဤအပလီကေးရှင်းများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်အသုံးပြုသောအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုစီ၌စကားဝှက်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။ ဤအမျိုးအစားများသည်က AES-256 လုံခြုံရေးစာဝှက်စနစ်အကယ်၍ ပြင်ပမှသူငယ်ချင်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာကိုအစဉ်အဆက်ရယူနိုင်ပါကထိုအချက်အလက်များကိုနှစ်အနည်းငယ်သုံးရန်ကြိုးစားရမည်။
မည်သည့်အကောင်းဆုံးစကားဝှက်မန်နေဂျာကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ၊ အချက်များများစွာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်သည်၊ အပလီကေးရှင်းများအားလုံးကိုပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်ရရှိနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အချို့လည်ပတ်မှုစနစ်များ၏အခ်ါကန့်သတ်ချက်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားတူညီသောရလာဒ်များသို့မဟုတ်ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကိုမပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာ iOS, Android, Linux, macOS နှင့် Windows အတွက်အကောင်းဆုံးစကားဝှက်မန်နေဂျာများနှင့်အတူမည်သူမည်ဝါကိုပြသပါမည်။
1.1 1 စကားဝှက်သဟဇာတ
2.1 LastPass လိုက်ဖက်တဲ့
3.1 OneSafe4လိုက်ဖက်မှု
4.1 Dashlane လိုက်ဖက်တဲ့
5.1 RememBear လိုက်ဖက်တဲ့
1 စကားဝှက်သည်စျေးကွက်အတွင်းပထမဆုံးရရှိနိုင်သည့်စကားဝှက်မန်နေဂျာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် သူကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏နံပါတ်တိုးချဲ့။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစကားဝှက်များကိုသိမ်းထားရုံသာမက software လိုင်စင်များ၊ ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်များနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်များ၊ သစ္စာရှိကတ်များသိုလှောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
1 စကားဝှက်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ် အချက်အလက်အားလုံးကိုမတူညီသောအမျိုးအစားများသို့ခွဲခြား, ဒါဆိုငါတို့က Gmail မေးလ်ရဲ့စကားဝှက်ကိုရှာတဲ့အခါအဲဒီအမျိုးအစားကိုပဲသွားရမှာပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာကိုအခြားကိရိယာများနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်သောအခါ 1Password က iCloud မှ (Apple ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့) သို့မဟုတ် Dropbox မှတဆင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
1 စကားဝှက်သည်နှစ်စဉ်ကြေးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုပေးသည်။ တစ် ဦး ချင်းအတွက်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂.၉၉ ပေး၍၊ ၎င်းသည်မတူညီသောဂေဟစနစ်များနှင့်မိသားစုတစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့် application အားလုံးနှင့်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၄.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်မိသားစုတစ်စုထဲမှ ၅ ယောက်ကိုလွတ်လပ်သောနည်းလမ်းဖြင့်မျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည်။ နေ့၏နေ့၌ငါတို့အသုံးပြုသော password များကို။
1Password ကို Apple ၏ထုတ်ကုန်ဂေဟစနစ်အတွက်ကန ဦး ထုတ်ဝေခဲ့သော်လည်းနှစ်များတစ်လျှောက်တွင်တိုးချဲ့လျက်ရှိသည် Linux မှလွဲ၍ ကျန် desktop နှင့် mobile platform အားလုံးတွင်ရရှိနိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်များကိုအမြဲတမ်းလုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ရန်ဤအမျိုးအစားအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Mac နှင့် Windows အတွက် 1Password ကို download လုပ်ပါ
နောက်ထပ်ကောင်းမွန်သောစကားဝှက်မန်နေဂျာများမှာ LastPass ဖြစ်ပြီး ၁Password နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုနှင့်တူသည်။ ဤလျှောက်လွှာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းထားသည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုကွန်ပျူတာကိုအမျိုးအစားခွဲခြားပါ ဒါကြောင့်လျှောက်လွှာကိုသင်ရှာဖွေစရာမလိုပါ။ ဤအပလီကေးရှင်းသည်ဤအမျိုးအစားအများစုနည်းတူကျွန်ုပ်တို့အားမိုဘိုင်းကိရိယာများအတွက်တိုးချဲ့ခြင်းကိုပေးသည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ထားသောဝက်ဘ်ပေါ်ရှိလိုအပ်သောကွက်လပ်များကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
1 စကားဝှက်လိုပဲ LastPass သည်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းသည့်စနစ်ကိုလည်းပေးသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်နံပါတ်များ၊ သစ္စာရှိကတ်များကဲ့သို့ပုံမှန်နှင့်မကြာခဏအသုံးပြုသောစကားဝှက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလုံခြုံအောင်ထားရန်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ကြေးပေးသွင်းရမှုနှုန်းသည်တစ်လလျှင် ၂ ဒေါ်လာသာရှိသည်။ သို့သော်မိသားစုတစ်ခုလုံးက၎င်းမှရသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုအသုံးချလိုပါကလစဉ်ကြေးဒေါ်လာ ၄ ဒေါ်လာသာ ပေး၍ လိုင်စင် ၆ ခုအထိပေးသွင်းနိုင်သည့်မိသားစုစာရင်းသွင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
LastPass သည်မတူညီသောလည်ပတ်မှုစနစ်များကိုပုံမှန်အသုံးပြုနေပါကကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်များကိုစီမံရန်အကောင်းဆုံး application တစ်ခုဖြစ်သည် Mac, Linux နှင့် Android, iOS နှင့် Windows Phone ကဲ့သို့ Windows များ။ ထို့အပြင် Firefox, Chrome, Opera နှင့် Maxthon တို့အတွက်ပင် extensions များကိုပေးထားသည်။
ရေးသားသူ: GoTo Technologies USA, Inc.
Windows, Mac, Linux အတွက် LastPass ကိုရယူပါ
OneSafe developer သည်ယနေ့အချိန်ထိအနည်းငယ်သောသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် သင်သည်စာရင်းသွင်းခြင်းစနစ်ကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုရသေးပါ အသုံးပြုသူများအားလုံးကိုသဘောမကျသည့်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သဖြင့်သင်ထိုအသုံးပြုသူအုပ်စုတွင်ရှိနေလျှင် OneSafe သည်သင်ရှာဖွေနေသော application ဖြစ်နိုင်သည်။ OneSafe မှကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်များ၊ ကဒ်၏ PIN နံပါတ်များနှင့်အဆောက်အအုံများကိုဝင်ရောက်ခွင့်၊ ဘဏ်စာရင်းအရေအတွက်၊ အခွန်အချက်အလက်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ၏အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်ပါပဲ။
1Password (သို့) LastPass ကဲ့သို့သောအခြား application များမှကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများစွာကိုမပေးနိုင်သည်မှာမှန်ပါသည်။ မည်သည့်သုံးစွဲသူမဆိုနေ့စဉ်နေ့စဉ်လိုအပ်သောအခြေခံရွေးချယ်စရာများကို OneSafe ကကမ်းလှမ်းထားသည် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏စကားဝှက်များကိုအမြဲတမ်းလက်ဝယ်ထားရှိရန်နှင့်အမြဲတမ်းသင်အမြဲကာကွယ်သင့်သည့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုရယူရန်။ နှစ်နှစ်သို့မဟုတ်သုံးနှစ်ကြာ subscription အောက်တွင်အလုပ်လုပ်သော application တစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့် developer သည်ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်မံ၍ ပေးရမည့်ဗားရှင်းအသစ်ကိုလွှတ်လိုက်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် subscription ပေးဆောင်ခြင်းထက်များစွာစျေးသက်သာသည်။
OneSafe4လိုက်ဖက်မှု
OneSafe သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသာရရှိစေသည် Apple နှင့် Google မိုဘိုင်းဂေဟစနစ်များအတွက်အထောက်အပံ့, ဒါကြောင့်ဒီ application ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Windows သို့မဟုတ် Linux PC (သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှအသုံးပြုလိုပါက OneSafe သည်ကျွန်တော်ရှာနေသည့် application မဟုတ်ပါ။
oneSafe | စကားဝှက်မန်နေဂျာ
ရေးသားသူ: Lunabee စတူဒီယို
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါကအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကိရိယာတစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုပါက Dashlane သည်လက်ရှိဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုသုံးလျှင်၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထိုကိန်းဂဏန်းတိုးချဲ့မည်ဆိုပါကတစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၃၉.၉၉ တန်ဖိုးရှိသော subscriptions များ၊ ဤအမျိုးအစားများတွင်တွေ့ရှိနိုင်သောအရာများအားလုံး၏အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်းကိုရယူရန်လိုသည်။
Dashlane မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝင်ရောက်ခွင့်အချက်အလက်များ၊ အကောင့်နံပါတ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်နံပါတ်များကိုတစ်နေရာတည်းတွင်သိုလှောင်ထားနိုင်ပြီးလုံခြုံသောမှတ်စုများကိုဖန်တီးနိုင်သည်၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသတင်းအချက်အလက် ခပ်သိမ်းသောအခါတို့၌ရှိစေလော့
Dashlane, LastPass နှင့်အတူ, ငါတို့အဘို့လျှောက်လွှာကမ်းလှမ်းသောပလက်ဖောင်းအခြားဖြစ်ပါတယ် Windows, Mac နှင့် Linux အပြင်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများအတွက်လည်းသိသာသည်။
Dashlane Password ကို Manager က
Windows, Mac နှင့် Linux အတွက် Dashlane ကို download လုပ်ပါ
Password manager ဈေးကွက်သို့အသစ်ရောက်ရှိလာသောသူများထဲမှတစ်ခုမှာ RememBear ဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေသည် ပလက်ဖောင်းအားလုံးတွင်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည် beta ၌တည်ရှိပြီးယခုအချိန်တွင်စကားဝှက်မန်နေဂျာများထံမှလာရောက်လာသော new ည့်သည်တော်အသစ်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်ရန်အတွက်မည်သည့် subscription system ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
RememBear သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာများကိုသိမ်းဆည်းရန်အနည်းဆုံးရွေးစရာများကိုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကြွေး ၀ ယ်ကတ်အချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုလည်းသိမ်းထားပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်မှတဆင့်တစ်ခုခု ၀ ယ်လိုသောအခါနံပါတ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပေါင်းထည့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
RememBear အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် Mac, iOS, Windows နှင့် Android။ ဒါ့အပြင် Chrome, Firefox နှင့် Safari တို့အတွက်အရင်က access data ကိုသိုလှောင်ထားသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် extensions များကိုလည်းပေးထားသည်။
RememBear: Password Manager နှင့်လုံခြုံသောပိုက်ဆံအိတ်
ရေးသားသူ: TunnelBear, LLC
Windows နှင့် Mac အတွက် Remembear ကို download လုပ်ပါ
အင်တာနက်ပေါ်တွင်စကားဝှက်မန်နေဂျာအမြောက်အများကိုတွေ့နိုင်သည်မှာမှန်သော်လည်းကျွန်ုပ်အာရုံစိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် လူသိအများဆုံးအမှားထဲမကျမိစေရန် ပိုပျော်လေ။ ဤစကားဝှက်မန်နေဂျာများအားလုံးသည်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်ပတ်နေခဲ့ပြီးသူတို့ပေးသောလုံခြုံရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုသည်လုံးဝမရှိတော့ပါ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယ.
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်လက်ရှိရရှိနိုင်တဲ့စကားဝှက်စီမံခန့်ခွဲမှုအရစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးရွေးစရာများဖြစ်ပြီး၊ ဒီဆောင်းပါးမှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အောက်မှာငါထည့်သွင်းထားသည်။ ကွဲပြားခြားနားသော operating system များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့နှင့်အတူစားပွဲပေါ်မှာ, မိုဘိုင်းသို့မဟုတ် desktop ကို။
Ext ။ browser (ဘရောက်ဆာ) အတွက်
1Password Si Si အဘယ်သူမျှမ Si Si အဘယ်သူမျှမ Si
OneSafe Si Si အဘယ်သူမျှမ အဘယ်သူမျှမ အဘယ်သူမျှမ အဘယ်သူမျှမ အဘယ်သူမျှမ
Dashlane Si Si အဘယ်သူမျှမ Si Si Si Si
မှတ်မိဖို့ Si Si အဘယ်သူမျှမ Si Si အဘယ်သူမျှမ Si
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » အကောင်းဆုံးစကားဝှက်မန်နေဂျာများ